संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारका तीन विकल्प «
संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारका तीन विकल्प
प्रकाशित मिति : श्रावण २४, २०७८ आईतबार
पटक पटकको लकडाउन तथा निशेधाज्ञाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर देखिन थालेपछि सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र उपचारमा तीन वटा विकल्पलाई रणनीतिको रुपमा अघि बढाएको छ । पहिलो चरणको कोरोना संक्रमणदेखि सरकारले लकडाउन र निशेधाज्ञा गरेर संक्रमण नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेपनि यो पटकबाट भने सम्भावित संक्रमणपछिको उपचारका लागि अक्सिजन उत्पादन र संक्रमण फैलन नदिन मास्क र खोप अभियानलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले साताव्यापी नेपाल मास्क अभियान शनिबारबाट शुरु गरेको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्द्रकी निर्देशक डा. राधिका थपलियाले कोभिड–१९ को बढदो संक्रमण तथा जोखिम यथावतै रहेको अवस्थामा सबै नागरिकलाई सही तरिकाले मास्क लगाउने व्यवहारलाई प्रबद्र्धन गर्न मास्क अभियान संचालन गरेको बताइन् । केन्द्रले मास्क प्रयोगको महत्व बुझाउँदै व्यवहार परिवर्तनका लागि प्रोत्साहन र उत्प्रेरित गर्न २३ साउन अर्थात शनिबारदेखि देखि २९ साउनसम्म नेपाल मास्क अभियान संचालन गरिएको हो ।
संचार केन्द्रकी निर्देशक थपलियाले अभियानको पहिलो दिन काठमाडौको सुन्धरामा अभियान र जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी मास्क लगाउन आह्वान गरिने बताइन् । यसका साथै मास्कको गुणस्तर, प्रयोग, वितरण र उत्पादनका सम्बन्धमा अभियान संचालन गरिने छ । यो अभियान एक हप्ता भएपनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रण नभएसम्म अभियानकै रुपमा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले शनिबार मास्क अभियानको औपचारिक उद्घाटन गदै सबैलाई मास्क लगाई कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
यसैगरी सरकारले सम्भावित कोरोना संक्रमणको वृद्धि र त्यसबिरुद्धको उपचारलाई व्यवस्थित गर्न अक्सिजन उत्पादन तथा खोप व्यवस्थापनलाई दोब्बर बृद्धि गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत वर्षको माघबाट शुरु गरेको खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन खोप केन्द्रमा ५० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । यसैगरी कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक मानिएको अक्सिजन उत्पादन प्रतिदिन क्षमता बृद्धि भएर ६८ प्रतिशत पुगेको छ ।
गत वर्षको चैतमा ठूलो अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर प्रतिदिन उत्पादन २ हजार १८९ रहेकोमा सो उत्पादन बढेर चालु आवको साउनमा ३ हजार ६९४ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी चैतमा अक्सिजन प्लान्टको संख्या ३० रहेकोमा सो संख्या चालु आवको साउनमा ६५ वटा पुगेको छ । यसैगरी सरकारले अक्सिजन प्लान्ट ६१ वटा र उत्पादन ५ हजार ३८१ थप गर्ने योजना रहेको जनाईएको छ । सरकारले तेस्रो तहरको कोरोना संक्रमण आउन सक्ने सम्भावनालाई मुल्यांकन गरेर ७ वटै प्रदेश सरकारलाई उत्पादन चुस्त दुरुस्त राख्न यस अघि नै पत्राचार गरिसकेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दैनिक १ लाख २० हजार भन्दा बढी मानिसले खोप लगाइरहेको जनाएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले शुक्रबारबाट देशव्यापी खोप अभियान समेत संचालन गरेको छ । शुक्रबारसम्म २२ लाख ८ हजार ५५ ले पूर्ण र ४४ लाख ३ हजार २१ ले पहिलो मात्राको खोप लगाएका छन् ।
हरेक वडाका तीन स्थानमा खोप केन्द्र राख्न माग
काठमाडौंका स्थानीयबासीले वडाका ३ वटा स्थानमा भेरोसेल खोपको दोस्रो डोजको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
शनिबार काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० स्थित रत्नराज्य माध्यामिक विद्यालयमा दोस्रो चरणको भेरोसेल खोप लगाउन पुगेका स्थानीयले खोप लगाउन धेरैको बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै हरेक वडाको ३ वटा स्थानमा खोप दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
शुक्रबारबाट सुरु भएको खोप काठमाडौं महानगरपालिका ३२ वटै वडाको १÷१ स्थानबाट दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर दोस्रो चरणको भेरोसेल खोप लगाउन नपाएकाहरु धेरै भएकाले वडामा ३ वटा स्थान तोकि सबैले खोप लगाउन पाउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने स्थानीय ताराबहादुर खड्काले माग गरे ।
यता, स्थानीय तहले भने आम नागरिकलाई सहज ढंगले खोप दिने व्यवस्था गरिएको दावी गरेको छ । कामनपा–१० का वडाध्यक्ष रामकुमार केसीले भेरोसेल खोपको दोस्रो डोज लगाउनका लागि आफूहरुले राम्रो व्यवस्था गरेको बताए । ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, महिलाहरुका लागि लाईन नबसी खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको उनको दावी थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आइतबारसम्म यो खोप लगाउने व्यवस्था गरेको छ । तोकिएका सबै खोप केन्द्रहरुका बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको पनि वडाध्यक्ष केसीले बताए ।
चौधरी फाउण्डेसनले काठमाडौंको कान्तिबाल अस्पतालमा ‘सारिकादेवी चौधरी आकस्मिककक्ष’ निर्माण गरी अस्पताल व्यवस्थापनलाई हस्तान्तरण गरेको छ
मातृ–शिशु मृत्युदर घटाउने कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन निर्देशन
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक सुरक्षा समितिले मातृ–शिशु मृत्युदर न्यूनिकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई
हरियोखर्क अस्पताल अनुगमनमा मुख्यमन्त्री पोखरेल ‘स्वास्थ्यका क्षेत्रमा देखिने गरी काम गछौं’
पोखरा – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बुधबार पोखराको हरियोखर्क अस्पतालको अनुगमन गरेका छन्
नेपालमा ४७ लाख मानिसमा उच्च रक्तचापको समस्या रहेको अनुमान सरकारले गरेको छ । विश्व उच्च
वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डा. अभय यादवले थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा आफ्नो विशेषज्ञ सेवा सुरु गरेका छन्
तीन दशकभन्दा बढी समय नर्सिङ क्षेत्रमा क्रियाशील वरिष्ठ नर्स बिमला श्रेष्ठ नाइटिङगल नर्सिङ अवार्ड २०७७